Lenovo က သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ရှစ်လက်မ Windows 8.1 Tablet ကိုထုတ်ဖော်ပြသ။ ~ The ICT.com.mm Blog
Lenovo က သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ရှစ်လက်မ Windows 8.1 Tablet ကိုထုတ်ဖော်ပြသ။
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ကွန်ပြူတာထုတ်လုပ်တဲ့ Company တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lenovo က သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ရှစ်လက်မ အရွယ်အစားရှိတဲ့ Windows Tablet ကို ဗုဒ္ဓဟူး နေ့က ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါတယ်။ Windows 8.1 ကိုမောင်းနှင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီး Screen သေးငယ်တဲ့ Windows Tablet တွေထုတ်လုပ်တဲ့နယ်ပယ်ထဲကို စောစောစီးစီး ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
Miix2 လို့နာမည်ပေးထားပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်း ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ အရှေ့၊ အနောက် ကင်မရာ နှစ်ခုပါရှိမှာဖြစ်ပြီး2megapixels ,5megapixels အသီးသီး တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ 64 GB Storage ပါရှိပြီး 128 GB ထိထပ်ဖြည့်နိုင်တဲ့ Micro SD Slot လည်းပါရှိပါတယ်။
Intel ရဲ့Bay Trail-T Quad Core Processor ကိုအသုံးပြုထားပြီး Windows XP,7တို့က Apps တွေကိုတောင် Run ပေးနိုင်ပါတယ်။ Display ကတော့ 1280 x 800 ဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ခေတ် Tablet တွေရဲ့စံနှုန်း နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်။ အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အပြာရောင် Cover တွေကိုလည်း တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Stand အနေနဲ့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
$299 သတ်မှတ်ထားပြီး ဒီလကုန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ၀ယ်ယူနိုင်မယ်လို့ Lenovo ကပြောပါတယ်။
Newer မြန်မာနိုင်ငံ၏၂၀၅၀ပြည့်နှစ်တွင် တိုးပွါးလာမည့်လူဦးရေ သန်းတစ်ရာအတွက် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံစေရန် ဆောင်ရွက်နေ
Older ဘယ် နည်းပညာ Company မှာသင်အလုပ်လုပ်ချင်သလဲ? Google? Apple? Facebook? Microsoft?